ဒိုင်လူကြီးရဲ့အငြင်းပွားစရာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဂျူဗီကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ မော်ရင်ဟို ဒေါသပေါက်ကွဲ
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ရိုးမားအသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက (၁-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး အေဘရာဟမ်ရဲ့ချေပဂိုးကို ဒိုင်လူကြီးက ခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အပေါ် မော်ရင်ဟိုတစ်ယောက် အကြီးအကျယ်ဒေါသပေါက်ကွဲနေပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် တစ်လုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးကို အဲဗာတန်အသင်းကနေ အငှားလာကစားနေတဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမားမွိုက်စ်ကိန်းက (၁၆)မိနစ်မှာသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ အေဘရာဟမ်က ချေပဂိုးပြန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် […]
ရလဒ်တွေဆိုးနေပေမယ့် မန်ယူမှာ ဆက်ရှိနေဦးမယ့် ဆိုးလ်ရှား
October 17, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ပြီးခဲ့တဲ့စနေညက ကင်းပါဝါမှာ လက်စတာကို ၄-၂ ဂိုးနဲ့အရေးနိမ့်ခဲ့လို့ မန်ယူရဲ့အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးသွားပေမယ့်လည်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ အသင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံရမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ခိုင်မာတဲ့အားကစားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Athletic က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပရီးမီးယားလိဂ် ၁၃ […]
လီဗာပူးနိုင်ပွဲမှာ မှတ်တမ်းကောင်းရတဲ့ ဆာလာ အသင်းပြောင်းမှာလား?
October 16, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ အခု ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် ၀ – ၅ လီဗာပူးပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့သူများကတော့ မာနေး (၉မိနစ်)၊ ဖာမီနို (၃၇၊ ၅၂၊ ၉၁ မိနစ်)၊ ဆာလာ (၅၄မိနစ်)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ပီအက်စ်ဂျီမှာ နေချင်လွန်းလို့ နေနေတာမဟုတ်တဲ့ ဘတ်ပီ
October 5, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ရီးရဲလ် အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိနေတဲ့ ဘတ်ပီ က ပီအက်စ်ဂျီ ကနေ ထွက်ခွာချင်တယ်ဆိုတာကို ဇူလိုင်လထဲက အသင်းကို ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရီးရဲလ် အသင်းဟာ နွေရာသီက ဘတ်ပီ ကို ခေါ်ယူဖို့ […]
အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် ဘယ်လိုရလဒ်တွေဖြစ်လာမလဲလို့ ပေါလ်မာဆန် နဲ့ လောရိုးတို့ကပြောပြီ။
October 1, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ဗီလာရီးရဲလ်ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကိုခံခဲ့ရပြီး သုံးပွဲဆက် အရေးနိမ့်တော့မယ့်အခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း သူနဲ့ ရမှတ်တူ ဇယားအောက်က အဲဗာတန်အသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့ အစောပိုင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ အဲဗာတန်တို့ရဲ့ […]
အဖြေရှာကြည့်မိတဲ့ သောကြာည စီးရီးအေ အမေးပုစ္ဆာ (ကောင်းပိုင်)
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ကက်ဂလီယာရီ 🆚 ဗီနီဇီယာ ကက်ဂလီယာရီက ဒီရာသီနိုင်ပွဲမရသေးဘူး။ ၆ပွဲ ၁၅ဂိုးပေးထားရတဲ့ခံစစ်က ဆလာနီတာနာ၊ စပီဇီယာ၊ ဂျီနိုအာတို့နဲ့အတူ အညံ့ဆုံးပါပဲ။ အိမ်ကွင်းမှာလည်း စပီဇီယာကိုသရေ၊ ဂျီနိုအာနဲ့ အမ်ပိုလီကိုရှုံးခဲ့ပြီး ပွဲတိုင်း ၂ဂိုးနဲ့အထက်ပေးခဲ့ရတယ်။ ဗီနီဇီယာက […]
ပီအက်စ်ဂျီ အတွက် ဂိုးစသွင်းပေးတဲ့ မက်ဆီကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ အရှူံးရလဒ် ရင်ခွင်ပိုက် ဂွာဒီယိုလာ
September 29, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ လီယွန်နယ် မက်ဆီဟာ ယမန်နေ့ညက မန်စီးတီးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ပီအက်စ်ဂျီအတွက် ပထမဆုံးဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး အဲဒါကို ဂွါဒီယိုလာက ချီးကျူးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီ – မန်စီးတီး ပွဲမှာ အိမ်ရှင် ပီအက်စ်ဂျီ […]
ပက်ဂျီဆန်၊ ဆွန်ဟောင်မင်တို့လို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ့် ဟွန်ဟီချန်
September 14, 2021 author one 0
M Cash 24 အကြောင်းသိလိုပါက M Cash 24 ကို နှိပ်ပါ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နာမည်ကျော်ကစားသမားစီရော်နယ်လ်ဒို အသင်းအတွက်ပွဲဦးထွက်မှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ ‘သတင်းလူသား’ဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာ ဝုလ်ဗ်အသင်းအတွက် ပွဲဦးထွက်မှာပဲဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သိပ်ပြီးလူမသိလိုက်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားသားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလကမှ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းကနေ ဝုလ်ဗ်အသင်းဆီ တစ်ရာသီအငှားနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားလက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးဟွန်ဟီချန်ပါပဲ။ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်အစမှာ ဝုလ်ဗ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းချက်တွေကြောင့် […]
ဒီနေ့ညမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် သရဲနီပြိုင်ဘက် ယန်းဘွိုင်းစ်အသင်းဆိုတာ အချဉ်တော့ မဟုတ် . . .
Facebook Page => https://bit.ly/3AQZRVp | App Download Link => https://bit.ly/3k41mc4 မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် ယန်းဘွိုင်းစ်အသင်းကို ဆွစ်ဇာလန်မြေမှာ ကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက် နှင့် ယန်းဘွိုင်းစ်အပြင် ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ ဗီလာရီးရဲ နှင့် အီတလီကလပ် အတ္တလန္တာတို့ဟာလည်း အုပ်စု ( စ ) […]
September 9, 2021 author one 0
Viber No => 09 969 710 910 Shwe Casino Facebook Page Link => https://bit.ly/3AQZRVp Shwe Casino App Download Link => https://bit.ly/3k41mc4 အင်္ဂလန်နည်းပြဆောက်ဂိတ်က ပိုလန်နှင့် သရေကျခဲ့တဲ့ခြေစစ်ပွဲတွင် လူစားလဲခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ […]